दुर्घटनामा एककाे मृत्यु – Kanika Khabar
दुर्घटनामा एककाे मृत्यु
Kanika Khabar १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ११:१२ May 14, 2020 मा प्रकाशित
आज दाङमा भएकाे सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
लमहीदेखि तुलसीपुर जाँदै गरेकाे ना ३ च ५९४५ नं. काे पिकअपले तुलसीपुरदेखि घाेराहीतर्फ आउँदै गरेकाे रा ५ प ३६८८ नं. काे माेटर साइकललाई ठक्कर दिदा माेटर साइकल चालक तुलसीपुर ७ निवासी विशाल थापा मगरकाे मृत्यु भएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएकाे छ ।
थापाकाे राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकाे क्रममा मृत्यु भएकाे हाे । माेटर साइकलमा सवार हक्की पुनलाई थप उपचारका लागि काेहलपुर रेफर गरिएकाे छ । दुर्घटना पश्चात् फरार रहेका पिकअप र चालकलाई तुलसीपुरबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएकाे छ ।
पिकअप चालक राजपुर गाउँपालिका निवासी प्रदीप महरा रहेका छन् ।